Baarlamaanka Itoobiya oo Qaaday Xaaladda Deg Degga ah - Halbeeg News
Baarlamaanka Itoobiya oo Qaaday Xaaladda Deg Degga ah
Xukuumadda Itoobiya ayaa qaadday xaaladda deg degga aheyd ee lagu soo rogay dalkaas bishii Febraayo ee sanadkan aynu ku jirno waxaana is casilay intii lagu jiray xaaladdan deg degga ah Ra’iisul Wasaarihii hore ee Xaylamaryam Desalin kadib bilooyin markii ay socdeen bannaanbaxyada.
Baarlamaanka Itoobiya ayaa meel mariyay xeer lagu soo afjarayo xaaladdii deg degga aheyd ee uu dalka Itoobiya ku jiray laba bil ka hor inta uusan dhamaan xiligii loo asteeyay xaaladda deg degga ah.
Dibadbaxayo waaweyn ayaa bilowday sanadkii 2015 kadib markii kacdoon ka dhan ah dowladda uu ka dhashay dadka Oromada oo ah qowmiyaddda ugu tirade badan dadka Itoobiya, kacdoonka oo goor dambana ku faafay qowmiyadda Amxaarada kuwaa iyaguna ah qowmiyadda labaad ee tiro ahaan kusoo xigta qowmiyadda Oromada.
Banaanbaxyada oo markii hore ka bilowday muran ka dhashay dhulka ayaa markii dambe isu badalay kuwa lagu dalbayo in la helo matalaad siyaasadeed oo heer qaran ah.
Bishii August 2017 ayey dowladda Itoobiya qaday xaaladda degdeg ah oo socotay 1o bilood oo xiriir ah taas oo sababtay dilka iyo xarigga dad fara badan oo kamid ahaa dadkii bannaan baxayay.
Tan iyo markii la doortay Ra’iisul Wasaaraha cusub Itoobiya Abiye Axmed oo noqonaya Ra;iisul Wasaarihii ugu horeeyay ee Oromo ah taariikhda Itoobiya ayaa waxaa socday dadaallo dib loogu hagaajinayo nidaamka iyo kala dambeynta dalka Itoobiya.
Ururka Falanqeeya Xasaradaha Caalamiga Oo Sheegay In Khilaafka Khaliijka Uu Saameeyey Soomaaliya
Harry Kane oo Noqday Ciyaariyahanka Ugu Qaalisan Dunida